Sony Bravia dhiqlaha iyo laydhka nalka ayaa daaraya oo daminaya si muuqata oo aan kala sooc lahayn - MediaLight Bias Lighting
Sony Bravia bug iyo nalalka eexda oo daaraya oo daminaya iyagoo umuuqda si aan kala sooc lahayn marka TV ga la damiyo.
Waxaad heshay boggan sababta oo ah nalalkaaga eexda ayaa sii daaraya marka Sony Bravia la xiro.
Warka wanaagsani waa in aysan jirin wax ka khaldan nalalkaaga eexda.
Warka xun ayaa ah inay jiraan arin la ogyahay oo TV-ga aan soo marin (iyo malaha laguma xallin doono Sony (isku xirka GitHub).
Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelino macmiil caqli badan, Josh J., kaasoo la kulmay dhibaatooyin u horseeday in cod-weynihiisu uu riixo markasta oo Bravia uu daarto oo uu xiro Sabab La Xiriira Bravia. Dib-u-eegis ku saabsan goleyaasha internetka ayaa u horseeday hagaajin taas, si ku habboon, sidoo kale qayb ahaan u xallisa Bravia Standby Bug ee nalalka eexda. Akhriso boggan gaaban si aad u fahamtid ciladda una ogaato waxa hagaajintu sameyn doonto.
Waxay u badan tahay inaad boggan heshay sababta oo ah markaad MediaLight-kaaga ka xoogayso dekedda USB-gaaga ee ku taal Sony Bravia, laydhadhka ayaa shidan oo si bakhtiyaa nasiib ah u galaya marka TV-ga la damiyo. Waa wax laga xumaado!
"Miyay noocyada kale ee laydhku ka damiyaan TV-ga?"
Maya. Noocyada kale ee nalalka waxay damiyaan oo keliya markay korontada ka baxaan ama ay lumiyaan awoodda. Taasi waa waxa aad filan lahayd. Haddii aad furtid laambad, wuu damiyaa. Bareesada ku xir oo gadaal ayey ka daarantaa. Laydhku waxba ma tarayo. Kaliya waxay shidan tahay markii awoodda la soo celiyo.
TV kasta oo Sony Bravia ah ayaa sidan sameeya.
Taasi waa hal sabab oo aan ugu darno kumbuyuutar kumbuyuutar oo leh MediaLight Mk2 Flex. MediaLight sidoo kale waxaa horey loogu sii qorsheeyay xarumo fara badan oo caqli badan iyo meelo fog fog oo ay ka mid yihiin nidaamka deegaanka ee loo yaqaan 'Logitech Harmony ecosystem'.
Xalka: Isticmaal awoodda dibedda oo barnaamijkeenna fogfog ugu soo hagaaji qalabkaaga fog fog ama xaruntaada.
Ama MediaLight-gaaga ka daa TV-ga, u beddel habka xakamaynta RS232C "serial," oo nalka ku demi MediaLight-ka fog ama xarun caqli-gal ah ama fog-fog caalami ah.
Ogsoonow: Waxaa nalagu wargaliyay in xalkaani uusan ka shaqeyn doonin meel ka baxsan Waqooyiga Ameerika. Si looga fogaado inay dhalaalaan marka TV-gu dansan yahay, koronto ka timaada qalab kale ama adabtarada AC ee ku xiran darbiga.
Waa kuwan tilmaamaha si aad ugu bedesho qaabkaaga dekedda RS232C ee taxanaha ah. Markii la dhammeeyo, TV-ga si toos ah ayuu dib u bilaabi doonaa.
Tag liiska Google oo leh dhammaan barnaamijyada muuqda. Badanaa halkaas waad imaan kartaa adiga oo gujinaya batoonka "Guriga" ee ku yaal fogaan-kaaga Bravia. Xullo ikhtiyaarka "Dejinta" dhinaca midig ee kore ee shaashadda (meeriskan ayaa laga yaabaa inuu ku beddelo cusbooneysiinta TV-ga Android ee mustaqbalka)
Hoos ugu dhaadhac qeybta "Shabakada iyo Qalabka" Qalabka Dejinta waxaadna arki doontaa shay la yiraahdo "RS232C control." Xulo.
Qeybta xakamaynta RS232C hoosteeda, xulo "Via serial port."
TV-gaaga ayaa dib u bilaabi doona ka dib markii aad tan dooratid, oo markii aad tan sameyso, laydhadhku way daari doonaan markii TV-ga la damiyo. Hadda si kalsooni leh ayaad ku shidi kartaa oo aad u demin kartaa laydhadhka xarun caqli-gal ah, fog-fog caalami ah, ama kantaroolka fog ee aan ku soo darnay Nidaamka Nalalka ee MediaLight eexda.
Fadlan ogow: TV-yada Android mararka qaar waxay ku qabtaan ficilada xagga dambe, sida soo degsashada qalabka wax lagu duubo iyo dib u soo kicinta, waana macquul in laydhku wali damin karo marar dhif ah, laakiin ma shidi doonaan oo si aan kala go 'lahayn u damin maayaan, libiqsi iyo had iyo jeer waxay ka jawaabi doontaa amarrada fog.
Marka, waxa ay tani macnaheedu tahay waa haddii aad leedahay nal nacayb oo ay ku jiraan aaladda fog waxaa hadda jira xallinta cilladda Bravia heeganka ah. 👍